Shiinaha Customized saabka processing Manufacture, Factory - Dongguan Guancheng qirayso Hardware Co., Ltd.
Hoyga > Mashiinka CNC > Qalabka aluminium ee aluminium ee CNC > Ka shaqaynta godka
1. Tilmaamuhu si weyn ayey u yareeyaan tirada qalabaynta, ka baaraandegidda qaababka isku dhafan ee qaybaha uma baahna qalab qalab adag leh. Haddii aad u baahan tahay inaad beddesho qaabka iyo cabirka qaybaha, waxaad u baahan tahay oo keliya inaad wax ka beddesho sawirrada qaybaha, aad u hagaajiso dariiqa qalabka makiinadda iyo habraacyada wax-soo-saarka si aad u soo saarto, oo ku habboon horumarinta alaabooyinka cusub iyo wax ka beddelka moodeelka.
2.1 Tayada wax-qabadka xasiloonida, saxsanaanta wax-soo-saarka sare, saxsanaanta wax soo-saarka soo-noqnoqodka sarreeya, waxay buuxisaa shuruudaha ka baaraandegidda aerospace, militariga, teknolojiyadda elektarooniga ah iyo dhinacyada kale.
2.2 Waxtarka ayaa ka sarreeya kiisaska noocyo kala duwan, dufcad yar iyo wax soo saar ballaaran, taas oo yareyn karta waqtiga diyaarinta wax soo saarka, hagaajinta mashiinka iyo kormeerka nidaamka, isla markaana yareyn kara waqtiga goynta sababtoo ah isticmaalka xaddiga goynta ugu fiican.
2.3 Waxay ku shaqeyn kartaa dusha sare ee ay adag tahay in lagu shaqeeyo habab caadi ah, iyo xitaa qaybo ka mid ah oo aan la arki karin.
3. Faa’iido darrada ka timaadda maaraynta tirada ayaa ah in kharashka qalabka mishiinka iyo qalabku qaali yahay, shaqaalaha dayactirka ayaa looga baahan yahay inay yeeshaan heer ka sarreeya.
Calaamadaha kulul: Processing saabka, Shiinaha, kartoo, saarayaasha, Warshad
Qalabka aluminium ee aluminium ee kiiska taleefanka gacanta